फेसबुकले थप्यो नयाँ सुविधा, डेलिभरी भएको सन्देश पनि मेटन सकिने :यसरी प्रयोग गर्नुहोस !! - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /बिज्ञान प्रबिधि/फेसबुकले थप्यो नयाँ सुविधा, डेलिभरी भएको सन्देश पनि मेटन सकिने :यसरी प्रयोग गर्नुहोस !!
फेसबुकले थप्यो नयाँ सुविधा, डेलिभरी भएको सन्देश पनि मेटन सकिने :यसरी प्रयोग गर्नुहोस !!
कुनै बेला भूलबस कुनै व्यक्तिलाई पठाउन खोजेको सन्देश अर्कैको इनबक्समा सेन्ड हुन्छ । यो समस्याबाट फेसबुकका प्रयोगकर्ताहरु निकै ठूलो समस्यामा थिए ।तर अब फेसबुकले ल्याएको नयाँ सुविधाले यो समस्याको हल गरेको छ । यसअघि प्राप्त मेसेज डिलिट गर्न सकिएपनि पठाइ सकेको मेसेज आफ्नो इनबक्समा मात्रै डिलिट हुने गर्दथ्यो । अब भने अरुकोमा डेलिभरी भएको सन्देश पनि मेटन सकिने भएको छ ।
फेसबुकले पठाइएको मेसेज डिलिट गर्नका लागि १० मिनेटको समयसीमा तय गरेको छ । यसको अर्थ के हो भने यदि युजरले कसैलाई भूलवस सन्देश पठाएको छ भने यो सन्देश डिलिट गर्नका लागि तपाईलाई दश मिनेटको समय दिइएको हुनेछ । अनसेण्ड फिचरका माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले च्याटसँगै पठाएका फोटो र भिडियो पनि डिलिट गर्न सक्नेछन् ।फेसबुकले अनसेण्ड गरेको मेसेजको कपी केही समयका लागि आफूसँग राख्नेछ । कतै यी मेसेज कसैलाई दुव्र्यवहार गर्न त होइनन भनेर चेक गर्न फेसबुकले केही समय यी मेसेज आफूसँग राख्ने भएको हो ।
दुखको कुरा चाहिँ के छ भने यो सुविधा हालका लागि भने नेपालका लागि खुला गरिएको छैन । अहिले बोलिभिया, पोल्याण्ड, कोलम्बिया र लिथुआनिया जस्ता देशमा यो फिचर दिइएको छ । तर छिट्टै यो फिचर नेपाललगायत विश्वभरी प्रदान गरिने विश्वास भने गर्न सकिन्छ ।यो फिचरलाई प्रयोग गर्न प्रयोगकर्तालाई आफूले पठाएको मेसेजमा ट्याप गरेर त्यसलाई केही समय होल्ड राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सबैका लागि हटाउनुस् भन्ने अप्समा क्लिक गरेर त्यो मेसेज हटाउन सकिन्छ ।Nepal 24 news
पृथ्वीभन्दा तीन गुणा ठूलो ‘सुपर अर्थ’ भेटियाे (भिडियोसहित)
देशकै पहिलो इलेक्ट्रिक बस तयार हुँदै, ठिटा इञ्जिनियरले गर्दैछन् कमाल
सार्वजनिक भयो मंगल ग्रहको आवाज ! मंगल ग्रहको आवाज पहिलो पटक सुन्न सकिने ![भिडियो सहित}
लुकाएर राखिएको वाइफाईको पासवर्ड, यसरी सजिलै सँग थाहा पाउने तरिका सिक्नुहोस
एसईई नतिजासँगै मोबाइल मेलामा एसईईका परिक्षार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट !!!